Ndụmọdụ ndị na -ebute ụzọ n'ịchụso okporo ụzọ na azụmahịa ịntanetị gị ... | Okporo ụzọ Iji Mgbakwunye
Ntuziaka Na-eduzi Na Ichebe okporo ụzọ Gị Internet Business
Na-enweghị Mgbasa ozi gị ma ọ bụ Mmemme Mgbakwunye, a gaghị amata nzukọ gị yana enweghị nkwenye, na okwu ndị ọzọ dị iche, ndị ahịa azụmahịa gị anwụọla!
09/22/2021 09:31 elekere GMT
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị mmadụ na-edebanye aha na ọkwa nke Mgbakwunye Mgbakwunye nke ahụ bụ, Onye na-akpọsa ihe, ma ọ bụ nke gị ma ọ bụ onye ọzọ na-atụ anya ịre ahịa ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ!
Maka ụdị Azụmaahịa a, ịchọrọ ịkwalite, ndị na-ere ahịa Mgbakwunye yana mpaghara kachasị mma maka ndị ahụ bụ Mgbanwe fficzọ Mberede, Ndepụta Nchekwa, Ndị Na-ezigara Ọrịa, na ihe ndị ọzọ.
Fewfọdụ n'ime ụzọ kacha mma iji kwalite weebụsaịtị gị ka anyị kpọọ CoOp Mgbasa ozi ebe ị na-achọghị ka sọfụ ogologo ụbọchị niile maka Ebe E Si Nweta.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmekọ Mgbakwunye n'otu aka ahụ na-anwa ikwere na mpụga igbe ahụ na ụfọdụ ahapụwokwa nyocha ha ma tinye ya na ibe ha Massive Programs. Otu n'ime ndepụta dị bụ.
Ihe anyị na-egosi site na nke ahụ bụ ndị mmadụ nwere ihe dị ka ụlọ ahịa, ebe nrụọrụ weebụ na-ama ụlọ ahịa dị ka ụlọ ọrụ Jeweler.
-eme ka a Weebụsaịtị nke ahụ bụ Onye ọrụ-enyi na enyi yana dị mfe.
Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ ịrata ndị ọbịa gị na Graphics yana nchịkọta ihe nkiri kọmputa na ntanetị. Ọ bụghị naanị na ọ ga-ewe oge tọn mana ndị ududo ga-achọpụta n'otu aka ahụ ịchọgharị ya na weebụsaịtị. Ọ bụrụ n ’idebanye aha gị otu n’ime ha ma bido n’ọrụ mgbasa ozi gị, ị ga-enwerịrị ike ibubata ndị ga-azụ gị.
Iji lekwasịrị ebe nrụọrụ weebụ web okporo ụzọ nwere ike ịdị ntakịrị ọrụ maka ile anya na mbụ. Ọ bụrụ n’ịghọta ihe ị ga-eme yana kwa ebe ị ga-amalite, nsogbu agaghị adị ma ọlị. Buru aro ndị a n'uche ka ị nwee nzukọ Internetntanetị dị irè karị!
Na-enweghị Mgbasa ozi gị ma ọ bụ Mmemme Mgbakwunye, a gaghị amata nzukọ gị yana yana enweghị nkwenye, n'okwu ndị ọzọ, ndị ọbịa azụmaahịa gị anwụọla! A otutu Mgbakwunye Marketers Ọzọkwa agbali iche na-abụghị nke igbe na ụfọdụ ụfọdụ n'ezie tọhapụrụ ha search nakwa dị ka enịm na onye ọ bụla ọzọ Oke Ndepụta nke Advertising Mmemme. Ọ dị mma, yabụ na ịchọrọ ịdọta ndị ọbịa gị na Graphics yana nchịkọta ihe nkiri kọmputa na ntanetị. Ọ bụrụ n’idebanye n’otu n’ime ha ma malite site na ọrụ mgbasa ozi gị, ị ga-enwe ike ịbịaru ndị ọzọ nwere ike ịre ahịa.
GỤRỤ AHỤ Kedu otu m ga -esi ezube okporo ụzọ na blọọgụ m?
Targetchọta ịzụ ahịa saịtị weebụ nwere ike ịbụ obere ọrụ na-esiri gị ike na anya mbụ.